တံတားပျက်ကြီးလား | အိမ့်မှူးသော်
ဒီတံတားကြီးက ဆွီဒင် နိုင်ငံနဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကြား ဖောက်လုပ်ထားတဲ့တံတားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်စီးကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် တံတားက ဆက်မနေဘဲ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘယ်လို ဆက်သွားမလဲပေါ့ ။ဒါပေ့မယ့် သူက တစ်ဝက်တစ်ပျက်မဟုတ်ပါဘူး။ ရေအောက်ထဲကနေပြီးတော့ တံတားကို ဆက်ဆောက်ထားပါတယ်။ အလယ်ရေလမ်းမှာ ပင်လယ်ကူး သဘောင်္တွေ သွားလို့ လွယ်ကူအောင်ပါ။ ဒီတံတားကြီးကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တံတားကြီးရဲ့ နာမည်ကတော့ Oresund Bridge ဖြစ်ပါတယ်။
khin oo may 2:44 PM
နည်းပညာမြင့်လိုက်တာ../ technology high. water sealed.
အောင်အောင် 7:56 PM
တော်လိုက်တာ သူများနိုင်ငံမှာ....ရွေပြည်တော်ရယ် မျော်လေတိုင်းဝေး..